सुदूरपश्‍चिममा बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुग्यो- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ६, २०७८ चित्रांग थापा
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परी शुक्रबार साँझसम्म मृत्यु हुनेहरूको संख्या ३४ पुगेको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिका —३ मा कार्तिक २ गते खोलामा बगेर बेपत्ता भएकी ७ वर्षीया बालिकाको शव शुक्रबार फेला परेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बिक्रम चन्दका अनुसार हालसम्म बाढी पहिरोमा परी सबैभन्दा बढी १६ जना डोटीमा, डडेलधुरामा ३ जना, बैतडीमा ४ जना, बझाङमा ९ जना, कैलालीमा १ र अछाममा १ जनासमेत ३४ जनाको मृत्यु भएको हो ।
यसैगरी प्रदेशका विभिन्‍न जिल्लामा १७ जना घाइते भएका छन् । एसएसपी चन्दका अनसार घाइते हुनेहरूमा डोटीमा ११ जना, डडेल्धुरामा २ जना, बैतडीमा २ जना, बझाङमा १ जना र बाजुरामा १ जना रहेका छन् ।
बझाङको थलारा गाउँपालिका —४ को डिक्लामा पहिरोमा परी बेपत्ता भएका २३ जनामध्ये हालसम्म ३ जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । ‘घटनास्थल क्षेत्रमा तीनवटै सुरक्षा निकाय सेना, सशस्त्र र प्रहरीको उद्धार टोली पहिरोमा पुरिएकाहरुको खोजी कार्यमा खटिएको छ,’ चन्दले भने, ‘घटनास्थल र आसपासको क्षेत्रमा खोजी कार्य जारी छ ।’
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता हुनेको संख्या २२ रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बझाङमा २० जना तथा कैलाली र बैतडीमा १/१ जना रहेका छन् । केही प्रमुख अवरुद्ध राजमार्गमा यातायात सञ्चालन भिषण वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेर खोला खहरेले कटान गरेर अवरुद्ध भएका सुदूरपश्चिमका प्रमुख राजमार्गमा शुक्रबारदेखि यातायात सेवा सञ्चालन हुन थालेको सुदूरपश्चिम ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीको अत्तरियाले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्ला जोडने प्रमुख धनगढी—डडेलधुरा राजमार्ग, डडेलधुरा— बैतडी राजमार्ग तथा डोटी—अछाम राजमार्गमा पहिरो पन्छाएर सवारी साधन आवागमन हुन थालेको प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बामदेव गौतमले बताए । उनका अनुसार अझै बैतडीको खोडपेदेखि बझाङ सदरमुकाम चैनपुर जोडने जयपृथ्वी राजमार्ग, बैतडी —दार्चुला जोडने महाकाली राजमार्ग र अछामको साँफे बगरदेखि बाजुराको मार्तडी जोडने सडक अवरुद्ध रहेको छ ।
एसपी गौतमका अनुसार डडेलधुरा —डोटी राजमार्गको रडुवा खोलामा पनि सडक अवरुद्ध छ । ‘दार्चुला सदरमुकामदेखि ५ किलोमिटर वरको सडकखण्ड नदीले कटान गरेकाले दार्चुला पुग्न सडक कटान भएको ठाउँमा हिडेर पार गरेपछि अर्को गाडी बदल्नु पर्ने अवस्था रहेको छ, ’ एसपी गौतमले भने, ‘उक्त सडक खण्ड मर्मत गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ११:१२
के दिदीबहिनी र छोरीहरूलाई तपाईंहरू सम्पत्ति दिन सक्नुहुन्छ ? छोरीहरूको सहअस्तित्वको लडाइँमा तपाईंहरूको सदाशयता रहला ? अब छोरीहरूले मैलेझैं पैतृक सम्पत्ति माग्ने हिम्मत गर्लान् ?
कार्तिक ६, २०७८ शीतल दाहाल
२०७३ मा बा बित्नुभो । त्यतिखेर सान्दाइ विदेश थिए । जेठा दाइ, आमा र मसहित तीन जना बाको किरिया बस्यौं । मेरो मनमा थियो, म छोरी भए पनि बाको ‘पितृकार्य’ मा सरिक हुनेछु । जेठो दाजुले जस्तै कपाल मुण्डन गर्न र सेतो कपडा लगाउन म मानसिक–शारीरिक दुवै हिसाबले तयार थिएँ ।
अन्तिम समयमा कपाल मुण्डन नगर्न र सेतो कपडा नलगाउन मलाई सुझाव र दबाब दिइयो, त्यसो गर्न वञ्चित गरियो । वञ्चित मात्रै होइन किरिया र पितृकर्मका नाममा पाप–धर्मको डर देखाएर मलाई मेरा बाको सन्तान हुनुको हक नदिन चौतर्फी घेराबन्दी गरियो । मृतकको छोरा भएको अवस्थामा छोरीहरूले त्यसो गर्न नहुने र त्यो जरुरी नभएको स्थानीय पण्डितलगायतको तर्क थियो ।
आफ्नो केश मुण्डन गर्न र आफ्नै लागि सेतो कपडाको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा आज खेद छ । म चाहन्छु, समाज र परिवारको हस्तक्षेपले अब अरू छोरीहरू मझैँ रोकिनु नपरोस् । साँच्चै भन्ने हो भने त्यसबेला मैले विद्रोह गर्न सकिनँ । आफूलाई जन्म दिने बाको शोकमा रहँदा, यस्तो जकडिएको समाजमा विद्रोह गर्ने काम कठिनसाध्य रहेछ, त्यसबेला बुझें । तर, सेतो लुगा र कपाल मुण्डनबाहेक अरू सबै कर्मकाण्ड मैले दाजुसरहै गरें । शोकको त्यस घडीमा आफन्त र समाजले छोरा–छोरीमा गर्ने विभेदका दृश्य हेर्ने एउटा आँखीझ््याल बन्यो मेरो बाको मृत्युकर्म ।
बा बितेको १३ दिनसम्म आफन्त र चिनेजानेकाहरू हामीलाई भेट्न आए । कोही आमाका आफन्त, कोही मेरा साथीभाई त कोही दाजुहरूका हितैसी । तर, सबैजसोको चिन्ता र चासो दाजुप्रति रह्यो । त्यसपछि क्रमशः आमाप्रति । बा त मेरा पनि थिए, तर एकदम कम आफन्तको ध्यान मतर्फ भएको अनुभव गरेँ । कारण मैले सेतो लुगा लगाएकी थिइनँ, कपाल मुण्डन गरेकी थिइनँ । सबैका लागि म छोरी, बहिनी, नानी ! तर, बाचाहिँ मेरो दाइको मात्रै बितेजस्तो देखिने आम व्यवहार !
दृश्य यस्तो देखिन्थ्यो, बाको मृत्युमा सहानुभूतिको जरुरी दाइलाई मात्र थियो । मानौं बा अर्थात् म छोरीको पनि बा बित्नु मेरा लागि कुनै क्षति र विषादको विषय होइन । त्यसो हुँदा घरमा आएका आफन्तमध्ये कत्तिले त मलाई भेट्दासमेत नभेटी गए । उनीहरू दाजु भेट्न आएका थिए किनकि दाजु ‘किरिया’ बसेका थिए । मेरो मनमा प्रश्न उब्जियो– ‘किरिया बस्नु’ भनेको के हो ? मेरो बुझाइमा किरिया बस्नु भनेको शोकमा रहनु हो । उसो त म पनि शोकको अवस्थामा थिएँ, दुःखको अवस्थामा थिएँ । तर, मेरो दुःखलाई समाजका मान्छे अनि उनीहरूले स्थापित गरेका मूल्य–मान्यताले कति मूल्यहीन र गौण ठान्दारहेछन् भन्ने आभास मलाई त्यस घटनाले गरायो । बाको दुःखमा १३ दिन बस्दा विभेद भोगें, रुढीवाद देखें र गरुड पुराणका महिलाद्वेषी कथाहरूलाई गाउँ–समाजले कति स्वाद मानेर सुन्दोरहेछ भन्ने बुझ्न पाएँ ।
बाको निधनपछि हामी आमा–छोरीले दुईवटा र दुई दाइका दुईवटा गरी हाम्रो परिवारमा वर्षको चारवटा श्राद्ध (पितृकार्य) सम्पन्न हुन्छ । गत बैशाखमा जेठो दाइको घरमा श्राद्ध थियो । पितृपूजाका लागि म तयार थिएँ । तर, त्यतिबेला स्तब्ध भएँ, जतिबेला श्राद्धपाठ गरिरहेका पण्डितले पितृपूजा गर्न मलाई रोक लगाए । त्यसबेला कसरी पण्डितसँग प्रतिवाद गर्ने भन्ने सोच्नै सकिनँ । र, चुपचाप पितृपूजाबाट बाहिरिएँ ।
आमा र दाजुहरूले पनि पण्डितसँग यस विषयमा बहस गरेनन् । म पनि बहसमा उत्रेर पितृलाई फूलपाती चढाउनतिर लागिनँ । तर, मनमा चाहिँ लाग्यो, ‘यो सानो विभेदको कुरा होइन, म यसबारे चुप बस्दिनँ ।’ किनकि छोरी भएकै कारण प्रत्यक्ष विभेद भएको उदाहरण र अनुभव यो दोस्रो थियो । धर्म–पापका नाममा, श्राद्ध–पितृकार्यका बहानामा छोरीहरूलाई बारम्बार अन्याय र आक्रमण गरिन्छ भन्ने आक्षेप हो मेरो । र, म यो आक्षेप सार्वजनिक रूपमै समाजको रीतिथिति–संस्कारको जिम्मा लिएका ठालुहरूलाई लगाउँदै छु ।
बाको मत्युअघि नै हाम्रो परिवारको पैतृक सम्पत्ति चार भाग लगाइएको थियो । तीन भाग हामी छोरा–छोरीलाई, एक भाग बा–आमाका लागि । बाको मृत्युपछि पैतृक सम्पत्तिको केही हिस्सा र आफ्नै सञ्चित रकम खर्च गरेर मैले घर बनाएँ, त्यस घरमा अहिले आमा र म बस्छौँ । यो घर न आमाका पतिको हो, न मेरा बाको । नितान्त व्यक्तिगत प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्नुको पनि कारण छ । आजसम्म हामीमध्ये सबै कि त लोग्नेको घरमा बस्यौँ कि त बाको घरमा । हामीमध्ये कति पो छौं, जो आफ्नै घरमा बस्न पाएका छौँ । छोरीको हकमा यस्ता उदाहरण बिलकुलै छैन । किन यस्तो हुनगयो ? यसको एतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक कारण र विज्ञान के हो ? छोराहरूलाई घर र सम्पत्तिको मालिक ठानिरहँदा किन छोरीहरूलाई अर्काको घरलाई आफ्नो ठान्ने पाठ पढाइयो ? किन छोरीहरूलाई सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट बेदखल गरियो ?
अब सुरु गरौं, सम्पत्तिसँगको लडाइँको मेरो निजी कुरो । दाजुहरूसरह पैतृक सम्पत्ति लिन मलाई पनि सजिलो थिएन । ‘सम्पत्ति लिएपछि यिनी पोइल जान्छिन्’ भनेर आफन्तले नै कुरा काट्दै हिँडे । बाउ–आमाको सम्पत्ति (पैतृक सम्पत्ति) लिन कानुनी झमेला आफ्नो ठाउँमा छ, त्योभन्दा ठूलो चुनौती सम्पत्तिकै कारण दाजुभाइसँग छोरीको सम्बन्ध बिग्रेला भन्ने आमाबाउको चिन्ता छ । ‘सम्पत्ति लिएपछि पोइल जान्छे’ भन्ने चिन्ताको प्रतिउत्तर के हुन सक्थ्यो ? के मसरह नै पैतृक सम्पत्ति लिएका मेरा दाजुहरूले बिहे गरेका छैनन् ? उनीहरूले सन्तान जन्माएका छैनन् ? छोरीले पैतृक सम्पत्ति लिनेबित्तिकै बिहे गर्न नपाउने हो ? या बिहे गरेपछि सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने हो ? उसले आफ्नो स्वतन्त्र जीवन जिउन नपाउने ? छोरीले सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गर्नेबित्तिकै ऊ दाम्पत्य सुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने ? पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरेका महिलाले दाम्पत्य सुख लिन नमिल्ने र सन्तान जन्माउन पनि नपाउने हो ?
संयोगले दाजुहरूसँग सम्पत्ति प्राप्तिका लागि मैले घरायसी–कानुनी लडाइँ लड्नु परेन, झैझगडा गर्नु परेन । तर, सबै छोरीलाई मेरैजस्तो संयोग नजुर्न सक्छ । त्यस्तो बेला छोरीहरूले के गर्ने ? बाउ–आमाको सम्पत्तिमा दाबी गर्ने हिम्मत गर्ने छोरीहरूले एउटा कुरा मनमा राख्नैपर्छ– आफूले दाबी गर्न चाहेको सम्पत्ति तपाईंको दाजु वा भाइले बिनादाबी अर्थात् निसर्त पाउँछन् । यदि दाजुभाइहरू निःसर्त पैतृक सम्पत्तिको हकदार हुन्छन् भने दिदीबहिनीहरू पनि पैत्रिक सम्पत्तिको स्वतः हकदार हुन्छन् । सम्पत्तिकै कारण दाजुभाइसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने मनोविज्ञानले छोरीहरूलाई तर्साउने–धम्क्याउने खतरा सबैभन्दा बढी रहन्छ । तर, याद गरौं, दाजुभाइसरह दिदीबहिनीलाई सम्पत्ति दिँदा सम्बन्ध बिग्रन्छ भने त्यो असाध्यै निम्छरो सम्बन्ध हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पाउनुपर्ने सम्पत्तिको माग वा दाबी गर्दा सम्बन्ध बिग्रन्छ भने बिग्रियोस् । र, अर्को कुरा, सम्बन्ध टिकाउने–जोगाउने ठेक्का दिदीबहिनीहरूको मात्रै होइन ।
युगौंसम्म पैतृक सम्पत्ति छोराहरूमा मात्रै हस्तान्तरण हुँदा सम्पत्तिकै लागि कुनै छोरीहरूले दाजुभाइसँग झगडा गरेनन् । उही बाउ–आमाका सन्तान, तर बाउ–आमाको सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाएका छोराहरू लाखौँ सम्पत्तिको मालिक भएको र छोरीहरूको दैनिक गुजारा पनि धौधौ भएका कैयौँ उदाहरण के हामीले नदेखेका हौं र ? समानताको आँखाले छोराछोरीलाई हाम्रा पुर्खाले उहिल्यै हेरेको भए आज कानुनी लडाइँ र झगडाको कुरै उठ्ने थिएन । ‘छोरीले पनि अंश माग्छन् त ?’ भन्ने मनोविज्ञान नै विकास हुने थिए । ठीकै छ कछुवा चालमै सही, युग नै बदलिँदै छ । अहिले त कानुनले नै छोरीहरूलाई स्वतः सम्पत्तिको हक दाबा गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरिसक्यो । अबको समय प्रत्येक छोरीहरूले आफ्नो हक सुनिश्चित गर्ने हो, हक अर्थात् सम्पत्ति सुनिश्चत गर्ने हो ।
यदि परनिर्भरताको बाटो बदल्ने हो भने पैतृक सम्पत्तिमाथि छोराहरूले जसरी युगौंयुगसम्म एकोहोरो हक–अधिकार पाइरहे, अब छोरीहरूले पनि सो हकलाई मौलिक हकसरह खोज्नुपर्छ । कानुनले पैतृक सम्पत्तिलाई मौलिक हक नमान्न सक्छ । तर, मसरहको दाजुभाइले मेरो बाउ–बाजेको सम्पत्ति निःसन्देह, निर्बाध रूपमा भोगचलन पाउँछन् भने मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हिम्मतका खातिर अब छोरीहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द पार्ने समय आएको छ । अब छोरीहरू शिक्षित मात्रै भएर पुग्दैन, जसरी घरका छोराहरू शिक्षित मात्रै भएर पुगेन । छोरीहरूले पनि पैतृक सम्पत्तिको मालिक हुन पाउनुपर्छ ।
हिजो छोरीले शिक्षा पाउँथेनन्, अचेल पाएका छन् । अब सम्पत्ति पनि पाउनुपर्छ । युगौंदेखि तपाईंहरूले सम्पत्तिको मालिक छोरालाई बनाउनुभयो, अब कम्तीमा छोरीलाई पनि आधा सम्पत्ति दिएर हेर्नुहोस् ! सम्पत्तिको शक्ति र सामर्थ्यमा अहिलेसम्म समाजमा पुरुषहरूको जगजगी देख्यौं । अब सम्पत्तिमा पनि समता स्थापित भएपछि त्यसले सिर्जना गर्ने अर्कै सुन्दर संसार हेरौं । छोरीहरूले पाएको शिक्षा र सम्पत्तिले अवश्य पनि युग बदलिनेछ ।
म बाको घरमा पनि बसें, दाजुको घरमा पनि बसें, साथीभाइ, आफन्तको घरमा पनि बसें । तर, जब म आफ्नै घरमा बस्न थालें, त्यस अनुभवलाई जीवनकै उत्कृष्ट र स्वतन्त्र बसाइ ठानें । भौतिक सम्पत्ति धाक र रवाफजस्तो सुनिएला, अहंकारी बुझिएला, तर छोरी आफैंले आफ्नो घर बनाउने विषय ठूलो बलको काम रहेछ । र, सम्पत्तिको शक्तिले मान्छेको स्वाभिमान स्थापना गर्न ठूलो आँट दिनेरहेछ, जुन हाम्रो परम्परागत सम्पत्ति सम्बन्धले छोरीलाई फिटिक्कै दिँदैन । बरु परम्परागत सम्पत्ति–सम्बन्धले छोरीले घर बनाउन सुरु गरी भने घरबारे नै प्रश्न गर्न सुरु गर्छ ः इँटा किन्ने पैसा कहाँबाट आयो ? बालुवा, सिमेन्ट र फलामे रड कसले किनिदियो ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न : घर बनाउने जग्गा कहाँबाट आयो ?
पैतृक सम्पत्तिबाट बेदखल पार्न मात्र होइन, छोरीको मनोबल कमजोर पार्न पनि कहिले र कस्ता प्रश्न गर्नुपर्छ, पितृसत्तालाई त्यो पनि राम्रोसँग थाहा छ । उसको घर नबन्दै घरभन्दा पनि ठूला आकारका प्रश्न सोध्नाले छोरीको मन दुख्छ भन्ने जानेर पनि प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न आतुर छ समाज । देशमा कति छोराका घर बने, ती घरबारे एउटा पनि प्रश्न प्रश्न बनेनन् । तर, टोलमा छोरीका एउटा घर बन्छ र अनेकौ प्रश्न उठ्छन् !
सम्पत्ति वा घर केवल चार पर्खालभित्रको सुरक्षित गुँड होइन । घर केवल सिँगारिएको भान्छा र सुविधावाला शौचालय होइन, यो त लडाइँको किल्ला पनि हो । छोरीहरूको अस्तित्वको लडाइँमा सम्पत्ति एउटा सुरक्षाकवच हो । छोरीको आफ्नो घर हुनु भनेको छोरी पनि ‘मान्छे’ बन्नु हो । आफ्नो घर भएकी छोरीले आफूले चाहेको काम गर्न सक्छे, पितृकार्यलगायत सबै संस्कारबारे आफ्नै विवेकले फैसला गर्न सक्छे । उसको स्वतन्त्रताको पहिलो सोपान आफ्नो निजी घर हो । यो मेरै अनुभवको निचोड हो ।
के दिदीबहिनी र छोरीहरूलाई तपाईंहरू सम्पत्ति दिन सक्नुहुन्छ ? छोरीहरूको सहअस्तित्वको लडाइँमा तपाईंहरूको सदाशयता रहला ? अनि के देशका छोरीहरूले मेलेझैं पैतृक सम्पत्ति माग्ने हिम्मत गर्लान् ?
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ १०:५१